DIASPORA MALAGASY: Aza omena any Onitiana Realy sy Beatrice Atallah ny volanareo! | Pakysse
novembre 29, 2015 at 4:24
Izahay teto La Réunion nanome 2400€ t@ tondra-drano (500€ no nomen’ny avy any Etazonia) fa tonga soa aman-tsara t@ nandefasana azy ny vola. Tsy nisy nihodina. Hatramin’ny iray centime hitan’ny masonay fa natolotra ho an’ny renim-pianakaviana sahirana. https://www.facebook.com/marvin.henikaja/media_set…
Momba ny 4×4, ny minisitra rehetra efa manana daholo. Ny mponina irery no tsy nanana fa fiara manokany foana no nentiny mandra-pahazo an’iny V8 iny. Sady nanao audit izy vao nividy. Fananam-panjakana entina mitsidika ny mponina any @ toerana faran’izay lavitra iny V8 iny (jereo ny vidéo) ary misoratra @ Minisitera rahateo fa tsy @ anaran’ny minisitra manokana akory. Mijanona ho fananam-panjakana rahatrizay miala izy. Rehefa tsy misy porofo d aza milaza olona ho mpangalatra. https://www.facebook.com/1050537391624037/videos/vb.1050537391624037/1089477664396676/?type=2&theater
Fanamarihana farany lehibe indrindra : miasa ny Ministra fa tsy mikabary. Ireto ny liens.
novembre 30, 2015 at 4:25
Tsy ny kabary tsara lahatra no handeha hanekenay ny resaka ataonareo mpanao politika tia voninahitra sy mpangalabolam-panjakana ireo! Raha nahomby sy niasa tokoa ramatoa minisitra dia efa ela no foana ny olona mihinana fako sy mitsindroka zoridira.
1 – Ny $500 izay nomeny diaspora avy aty Amerika Avaratra dia tsotra. Mahamenatra no sady mampahonena fa ireny no atao hoe seho ivelany! Tsy henatra, tsy tahotra ny zavatra nataonareo fa dia olona traboina efa be mpanome fanampiana no mbola nanaovana teny tsara lahatra sy fandresen-dahatra teny Andohatapenaka.
2 – Raha olona manana »conscience » sy mahay miasa, manao sosialim-bahoaka dia tsotra ny azo ambara @ ity resaka 4*4 TOYOTA V8 tao @ RASSETA ity.
– Asehoy ny carte grise fa any ministera tokoa ilay fiara ary aza matahotra ny manao izany!
– Aleo manofa fiara na mijery ireo fiara marobe ao @ ministera entina mitety ny faritra. Na mandeha taxibrousse midina any ambanivohitra mitety any Madagasikara. Fomba fisainana sy fomba amam-panao efa ao anaty Tompoko ny toetra tokony hananana, indrindra ho anio ministera iray io. Tsy hanao lava teny izahay fa tsy ho laozan’izay olona miseo ho azy ho dadany foana i Madagasikara. Saingy indrisy, olona matikambo sy be resaka ary mpangalatra ny volam-panjakana hatrany no misy. Ary aza hadino ihany koa fa na misy na tsy misy ny fanampiana dia olona mahay miharitra ny malagasy!
Ny anay dia tsotra: Ho ataonay hatrany ny « campagne de sensibilisation » raha mbola manao resaka tsy mangarahara ny politisianina malagasy. Ho resenay lahatra ireo malagasy manerana izao tontolo izao, @ tsy hanomezana vola anio ministera iray io! Na misy fanampiana Tompoko, na tsy misy ny fanampiana dia ny omaly tsy niova hatrany ny fomba amam-panaonareo politisianina tsy misy valera, mpisoloky sy mpangalatra ny volam-panjakana rehetra ireo.
Vahoaka mijaly, mahantra sy sahirana ary mihinana zoridira sy fako no betsaka hatramin’izay ka hatramin’izao!
novembre 30, 2015 at 10:31
Ary ny fampiasana ny 4×4 ihany no fanenjehana mivaingana ataonao, fa tsy misy porofo hafa fa dia Fanaratsiana sy Fanenjehina fotsiny. I Beatrice Atallah aza no tena faikany, nahatafita tamin’ny halabato ireo mafia ho tonga eo amin’ny fitondrana tsy asianao teny akory. Onitiana nihezaka nanao izay vitany, hanavotra ny gasy sahirana no henjehinao toy ireo be fialonana miseho tia tanindrazana kanefa manenjika ireo miasa ho an’ny tanindrazana, tsy misy olona tonga lafatra fa avelao izay hanampy ny madinika hanampy, na hangalatra aza izy hanao izany, tsy mba nankafia ny tantaran’i Robin des Bois angaha ianao?
Miasa mafy tokoa i Onitiana realy mangalatra sy mameno ny paosy.
décembre 2, 2015 at 12:11
Mety ho marina ny voalazanao fa tany amin’ny zavatra hafa no tena niompanan’ny saiko. Ny teny Malagasy ampiasainao dia tena maro loatra ny diso. Fanampariaham-pahefana no izy, anoratako (filazam-potoana ankehitriny io), fahasahiana fa tsy fasahiana, hadalana fa tsy adalana, eritreritra fa tsy heritreritra, niaritra,mokon-doha fa tsy monkodoha…
Tsy handroso mihitsy i Madagasikara na hitabataba ary isika raha tsy mipetraka ny hasiny.
décembre 2, 2015 at 8:01
Olona te ho dadany hafa ihany koa ve ity miafina @ solon’anarana ity? Aza ny teny diso no jerena fa ny hevitra zaraina. Raha ilaina ny mpampianatra ny teny malagasy dia afaka mijery izany fa hatreto aloa dia tsy ilaina izy. Azonay an-tsaina ihany ity olona manoratra ity. Olona te ho mpandika teny nefa ny teny ampiasiny ihany koa aza dia feno diso tanteraka.
Ilay fampiasanao ny « vanim-potoana ankehitriny » izay lazainao dia efa misy diso. Tsy any ny ady hevitra fa ny toe-tsaina te ho afaka nefa ohatrany mbola tsy afaka tsara no mahagaga eto
septembre 28, 2016 at 3:03
haitsika malgachie loatra ny manaratsy olona!mampalahelo ny toe-tsaina
« Monster Spectacular in Montréal: Drift, monster trucks, quad, funny car
Harinjaka Ratozamanana (Tantara2): Mendrika azy ve ny toerana maha DG ny ministeran’ny indostria ho fampandrosoana ny sehatra tsy miankina? »